Charlie Munger Quotes: Biography uye makumi manomwe emitsara inozivikanwa kwazvo | Ehupfumi Zvemari
Mumwe anozivikanwa weAmerica investor ndiCharlie Munger. Kunze kwekuve shamwari uye mushandirapamwe wekudyara guru Warren Buffett, Munger mumwe wevanhu vakapfuma kwazvo pasirese. ane huwandu hwayo parizvino hunokosheswa pamabhiriyoni emadhora 2,1. Nyaya yake inosuruvarisa uye nehunhu hwakawanda uye nesimba iye pakupedzisira akakwanisa kuwana rusununguko rwemari. Mashoko aCharlie Munger anoratidza hupenyu hwake hwakaoma uye ruzivo rwemari.
Munhu akagona kusimuka kubva pamuromo wedutu kuti ave mumwe wevapfumi vanhu aripo tAne huchenjeri hwakawanda uye zviitiko zvekupa. Ndosaka tichazotaura muchinyorwa chino zvishoma nezvekuti ndiani muhomwe mukuru uyu uye makumi manomwe ane mukurumbira Charlie Munger anotora mazwi.
1 Charlie Munger's 70 Akakurumbira Makotesheni
2 Ndiani Charlie Munger
Charlie Munger's 70 Akakurumbira Makotesheni
Huchenjeri hunogona kuburitswa nemushambadzi mukuru uyu hunogona kuenda kure. Kutenda kumitsara yaCharlie Munger tinogona kuwana kurudziro uye rubatsiro kwete chete yezvemari nyika, asiwo isu pachedu kusimbisa kuraira kwedu uye chishuwo chedu chekuverenga, Zvakanaka, iye murume ane tsika kwazvo anodzivirira kukosha kwekuwana ruzivo rutsva zuva nezuva. Tevere isu tichaenda kuona 70 inonyanya kuzivikanwa Charlie Munger mitsara.
"Gara uchitora mugwagwa wepamusoro, haufambi nevanhu."
"Chinhu chakanakisa chinogona kuitwa nemunhu kubatsira mumwe munhu kuziva zvakawanda."
"Rangarira kuti mukurumbira uye kuvimbika ndizvo zvinhu zvako zvakakosha kwazvo, uye zvinogona kurasikirwa nemwenje."
"Tora zano rakareruka wobva warikoshesa."
“Ndinotenda kuranga rekugona zvakanakisa zvakawanikwa nevamwe vanhu. Ini handitende mukugara pasi uye kuyedza kuzvirotera zvese iwe pachako. "Hapana munhu akangwara kudaro."
"Vanhu vanoverenga zvakawandisa uye vanofunga zvishoma."
"Kukanganisa kwakawanda kwehupenyu kunokonzerwa nekukanganwa izvo munhu ari kunyatso kuedza kuita."
"Tine mabhasikiti matatu ekuisa mari: hongu, kwete uye zvinonetsa kunzwisisa."
“Unoda hunhu kuti ugare nemari yese iyoyo usingaite chinhu. "Handina kusvika pandiri, ndichitsvaga mikana yakawandisa."
"Vakamubvunza, Ndezvipi zvakavanzika zvebudiriro? mhinduro yake yaive: Iva nepfungwa ”.
“Kuti uwane zvaunoda, unofanirwa kukodzera zvaunoda. "Nyika haisati yave nzvimbo inopenga zvekuti inogona kupa mubairo kuvanhu vazhinji vasina kukodzera."
"Chandinongoda kuziva ndechekuti ndonofira kupi ndisingamboendeko."
“Hakuna fomula imwe chete. Unofanirwa kuziva zvakawanda nezve bhizinesi uye hunhu hwevanhu uye manhamba ... Hazvina musoro kutarisira kuti pane mashiripiti ekuitira iwe ”.
"Handina kucherechedza miganho yenzvimbo dzedzidzo uye ndakangobata mazano ese makuru andaigona."
"Dai vanhu vasina kunyanyo kanganisa, isu hatinga pfumi kudaro."
“Muhupenyu hwangu hwese, handisati ndasangana nevanhu vakachenjera (munzvimbo yakakura nyaya) vasina kuverenga nguva dzese, hapana, zero. Iwe unogona kushamisika kuti Warren Buffet anoverenga zvakadii uye yakawanda sei zvandinoverenga. Vana vangu vanondiseka. Vanofunga kuti ndiri bhuku rine makumbo maviri rakanamatira panze ”.
"Chero bedzi ndine bhuku muruoko rwangu, handinzwi sekuti ndiri kutambisa nguva yangu."
"Ndinoedza kubvisa vanhu vanogara vachipindura zvine chivimbo mibvunzo yavasina ruzivo rwechokwadi."
"Kuteedzera boka kunokoka kudzoka kune zvinorehwa."
"Mari hombe haisi mukutenga kwekutengesa, asi mukumirira."
"Nekuda kwekuti unozvifarira hazvireve kuti nyika inozokupa iwe."
"Tiri kutsvaga bhiza rine mukana we50% wekukunda uye rinobhadharwa 3 kusvika 1."
“Mutemo wesimbi wezvakasikwa ndewekuti: iwe unowana izvo zvakakodzerana newe. Kana uchida kuti masvosve auye, unoisa shuga pasi ”.
"Nhumbi dzakanakisisa dzekukwegura hupenyu hwakashandiswa zvakanaka hunotangira izvi."
"Iyo algorithm yakakura yekurangarira kana uchibata neiyi maitiro iri nyore: pfungwa kana chokwadi hachina kukosha zvakare, nekuda kwekuti inowanikwa kwauri."
"Zvehupfumi hazvigone sei kuita hunhu?" Kana zvisiri zvehunhu, chii icho gehena?
"Beta uye yazvino portfolio dzidziso haina musoro kwandiri."
"Shanje chitadzo chakapusa chaicho nekuti ndicho chivi chausingatombonakidzwa nacho."
“Kune kurwadziwa kukuru uye hakuna kunakidzwa. Sei uchida kupinda mumota iyoyo? "
"Kana iwe usinganzwisise zvepuraimari, asi zvishoma zvakasikwa, masvomhu ehunhu hwekutanga mune yako repertoire, unobva wapfuura nehupenyu hwakareba semurume ane gumbo rimwe mumakwikwi ekukwikwidza."
“Kana chimwe chinhu chakanyanya kuoma, tinoenderera kune chimwe chinhu. Chii chingave chakareruka kupfuura icho?
"Kukudziridza muhupenyu hwese-wega kudzidza kuburikidza nehunyanzvi kuverenga; kurisa kuda kuziva uye edza kuva neuchenjeri mazuva ese. "
"Enda unorara wakangwara kupfuura zvawakamuka."
"Haufanire kuve nekupenya, kungova nehungwaru zvishoma pane vamwe vakomana, paavhareji, kwenguva yakareba."
Wana uchenjeri hwenyika uye gadzirisa hunhu hwako zvinoenderana. "Kana hunhu hwako hutsva huchikupa kusakurumbira kwenguva pfupi neboka rako rezera ... ipapo kugehena navo."
"Musiyano uripo pakati pebhizimusi rakanaka neiro rakaipa nderekuti iro rakanaka rinowanzofanira kutarisana nesarudzo dzakareruka uye rakaipa kazhinji rinofanira kutarisana nesarudzo dzinorwadza."
“Mumwe munhu anogara achifumiswa nekukurumidza kupfuura iwe. Iyi haisi nhamo ”.
"Kuziva zvausingazive kunobatsira pane kungwara."
“Isu tese (Charlie Munger naWarren Buffett) tinosimbirira kuti nguva ivepo mazuva ese ekugara tichifunga. Izvo hazviwanzo kuwanikwa mubhizinesi reAmerica. Tinoverenga nekufunga ”.
"Hakuna mudzidzisi ari nani pane nhoroondo, kuti aone ramangwana ... Pane mhinduro dzinokosha mabhiriyoni emadhora mubhuku renhoroondo re $ 30."
Iwe unowana sei murume akanaka? -nzira yakanakisa ndeyekukodzera mukadzi akanaka ”.
“Tose tiri kudzidza, kugadzirisa kana kuparadza pfungwa nguva dzese. Kukurumidza kuparadza mazano ako kana nguva yacho yakwana ndeimwe yeakakosha hunhu hwaunogona kuwana. Unofanira kuzvimanikidza kuti utarise kune rimwe divi nharo.
"Kupenga kwechaunga, tsika yevanhu, pasi pemamwe mamiriro ezvinhu, kuita semamoni, inotsanangura kufunga kweupenzi kwevakangwara varume uye nehunhu hwakapusa."
“Muenzaniso wehurongwa hune mutoro chaizvo mashandisiro aishandiswa nevaRoma pavakavaka arch. Iye mukomana akagadzira arch aive pasi payo pakabviswa scaffolding. Zvakafanana nekurongedza yako parachuti. "
“Dzivisa kurwadziwa; kuramba kwepfungwa. Mumwe anofanirwa kubvuma chokwadi kunyangwe munhu asingachifarire. "
“Warren ataura pamusoro peiyi mari inoderedzwa. Handisati ndamboona achizviita. "
“Vese vatengesi vemari, mukukwana, vangangove nekushomeka kwekudzoka pagore kwakaenzana nemari yose yevatengesi vavakasarudza kutakura pamwe chete. Ichi ichokwadi chisingarambike chehupenyu. "Uye zvakare hazvinzvenge kuti hafu yevatengesi vacho vanowana mhedzisiro pazasi pevhareji mhedzisiro mushure mekutora vatengesi, vane mhedzisiro mhedzisiro inogona kunge iri pakati pekusanakidza uye lousy."
“Kukanganwa zvikanganiso zvako kukanganisa kukuru kana iwe uri kuedza kuvandudza kugona kwako. Chokwadi hachikurangariri. Wadii kupemberera zvakapusa muzvikamu zvese izvi?
“Vashandi vemari havagoni kuramba vachikunda musika. Naizvozvo, zvinonyanya kushandirwa nekudyara mari munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemari yakaderera-indekisi indekisi kana (mari-inotsinhanisirwa-mari) ".
"Chikonzero chatinodzivisa izwi rekuti" kudyidzana "ndechekuti vanhu vanowanzo taura mabhenefiti ekubatana pane kuuya. Hongu iriko, asi kune akawanda kwazvo mapikirwa enhema. "Berkshire izere nekubatana, hatidzivise kudyidzana, zvinongoreva kubatana."
"Isu tinoedza zvakanyanya kutora mukana wekugara tichirangarira zviri pachena, pane kubata esoteric."
"Hupenzi mashandisiro anoita vanhu zvakapfuura uye kwete zvishoma benzi, asi kupusa kukuru."
"Zvinoshamisa kuti vanhu vazhinji vakaita sesu vakawana zvakadii kubva mukuedza kugara vasina kupusa, pane kuedza kuve vakangwara."
“Unofanirwa kugara mukati meyandinodaidza kuti denderedzwa rako rehunyanzvi. Iwe unofanirwa kuziva zvaunonzwisisa uye izvo zvausinganzwisise. Hazvina kukosha kuti denderedzwa rakakura sei. Asi zvakakosha kuti muzive kuti papi pegumira ”.
"Tine zvakawanda zvinochinjika uye chimwe chirango maererano nekusaita chinhu chakapusa kuti ungoshingairira, kuranga kungorega kuita chero chinhu chakashata nekuti haugone kutsungirira kusaita basa."
“Berkshire izere nevanhu vane chishuwo chakasiyana chemabhizinesi avo vega. Ndingati kuda kwakakosha kudarika kugona kwehuropi hwedu ”.
“Ndeapi makambani makuru akafanana muvazhinji ndeekuti anowana hunyanzvi zvakanyanya. Uye zvechokwadi zvinoitika kuhurumende zvakare. "Uye, chaizvo, handifarire hutongi, zvinoita zvikanganiso zvakawanda."
“Tese tiri vaviri tinosimbirira kuti nguva ivepo mazuva ese ekugara tichifunga. Izvo hazviwanzo kuwanikwa mubhizinesi reAmerica. Tinoverenga uye tinofunga. "Saka ini naWarren tinoita zvakawanda kuverenga nekufunga kupfuura vanhu vazhinji vari mubhizinesi."
"Unofanirwa kufungidzira kuti hupenyu huchaoma uye zvibvunze kana uchigona kuutora uye kana mhinduro iri hongu, chingonyemwerera woenderera mberi."
"Iwe unofanirwa kuve nechido chakasimba chekuziva nei zvinhu zvichiitika. Iyi nzira yekufunga, yakachengetwa kwenguva yakareba, zvishoma nezvishoma inovandudza kugona kwako kutarisisa pachokwadi. "Kana iwe usina nzira iyi yekufunga, unofanirwa kukundikana kunyangwe iwe uine IQ yepamusoro."
"Pfungwa yekumucheto kwekuchengeteka." Chirevo chaGraham hachizombove chekare, zano rekugadzira musika muranda wako harizombove rechinyakare. Pfungwa yekuva nechinangwa uye isingafadzi haizombovi yechinyakare. Saka Graham aive nemazano mazhinji akanaka. "
“Kubhengisa ibhizimusi risinganzwisisike. Miedzo yakapihwa kuna CEO kuita chimwe chinhu choupenzi yakakura kwazvo kubhengi kupfuura mumakambani mazhinji. Naizvozvo, inzvimbo ine njodzi yekudyara nekuti pane nzira dzakawanda dzekubhengi kuti ramangwana renguva pfupi riite serakanaka nekutora njodzi idzo iwe chausingafanire kutora mune ramangwana rerefu. Uye saka kubhengi inzvimbo ine njodzi yekudyara uye kune zvimwe zvisaririra. Berkshire yakaedza kusarudza izvo zvakasarudzika nepese pazvinogona napo. Uye handina chimwezve chandingataure pamusoro penyaya iyi, kunze kwekunge ndine chokwadi chekuti ndiri kutaura chokwadi ”.
"Dzivisa kushanda wakananga pasi pemumwe munhu wausingayemure uye usingade kufanana naye."
"Hupenyu, muchidimbu, hwakafanana nemutambo we poker, mauri maunofanirwa kudzidza kurega dzimwe nguva kana wakabata ruoko runodiwa, unofanira kudzidza kubata zvikanganiso uye chokwadi chitsva chinoshandura kusagadzikana."
"Ose smart investa ndeye kudyara kwekukosha kuwana zvakawanda kupfuura zvauri kubhadhara."
Iyo isina kukwana uye yakaganhurirwa hunyanzvi huropi hwemunhu inotsauswa nyore nyore kuti ishande neizvo zviripo kwaari. Uye huropi haugone kushandisa zvaisingakwanise kurangarira kana kana ichivharwa kubva pakuziva nekuti inokurudzirwa zvakanyanya nechero kana kupfuura mafungiro epfungwa ane simba rakasimba pairi ... chimiro chakadzika chepfungwa dzemunhu chinoda kuti iyo nzira yekugona Yakazara chiyero chechero mhando chero ripi zvaro kudzidza zvese kugona kutsetsenura kana uchizvida kana kwete ”.
“Ndakasangana nevakangwara zvikuru, sezvazviri, mumabhuku, kwete mukirasi. Handikwanise kuyeuka pandakatanga kuverenga Benjamin Franklin. Pandaiva nemakore manomwe kana masere ndaive naThomas Jefferson pamubhedha wangu. Mhuri yangu yaifarira zvinhu zvese izvi: kuenda kumberi kuburikidza nekurangwa, ruzivo uye kuzvidzora.
“Ndinogara ndichiona vanhu vachisimuka muhupenyu vasina kuchenjera, dzimwe nguva vasingatombo shingairira, asi michina iri kudzidza. Vanorara husiku hwega hwega vakangwara zvishoma pane zvavakaita pavakamuka uye zvinobatsira, kunyanya kana uine nzira refu pamberi pako. "
“SaWarren, ndaive neshungu dzekuda kupfuma, kwete nekuti ndaida Ferraris, chandaida kwaive kuzvimiririra kwangu mune zvemari. "Ndanga ndichimuda zvisingaite."
“Pedza zuva rega rega uchiedza kuve nehungwaru zvishoma pane zvawakamuka pawakamuka. Zuva nezuva, uye pakupera kwezuva, kana ukararama kwenguva yakakwana sevanhu vazhinji, uchawana zvaunokodzera kubva muhupenyu. "
Ndiani Charlie Munger
Muna 1924, mutyairi weAmerica Charlie Munger akaberekerwa muOmaha, Nebraska. Ane makore makumi maviri nemapfumbamwe, mukadzi wake akamuramba, zvichikonzera kurasikirwa kwenzvimbo yake yaCharlie Munger. Chaizvoizvo iye akasara asina imba yake yemhuri muPasadena, California. UyeIchi chiitiko chakamusiya apotsa atsemuka. Zvakare, mwedzi mishoma gare gare, mwanakomana wake ane makore masere, Teddy, akaonekwa aine leukemia. Ichi chirwere chakakonzera kufa kwake gore rakatevera.
Zvisinei, Charlie Munger haana kukanda mapfumo pasi pahupenyu uye parizvino mumwe wevanhu vakapfuma kwazvo pasirese, nemumwe wake Warren Buffett. Ndokusaka mitsara yaCharlie Munger inogona kunyanya kunakidza. Iye ndiye mutevedzeri wemutungamiri wekambani yeBerkshire Hathaway, inobata kambani, izere kana zvishoma muridzi wemasheya emapoka akasiyana emabhizinesi. Kunge shamwari yake Warren Buffett, Charlie Munger akapawo mamirioni akati wandei kuzvipo zvekubatsira.
Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti uyu muhombe investor anoda zvepfungwa. Uyezve: Akanyora bhuku rakanzi "Varombo Charlie's Almanack." Mariri, anoongorora makumi maviri neshanu ekufungisisa anokanganisa kugona kwevanhu kuita sarudzo, kukanganisa chiito ichi. Chimwe chikonzero nei makotesheni aCharlie Munger angave anonakidza kwazvo.
Sezviri pachena, aya makumi maviri neshanu ekuziva kusasarura anogona kuve nesimba kwazvo kana zvasvika pakukurudzira kana kunyengetedza mumwe munhu kana vachifanira kuita sarudzo. Nechikonzero ichi ivo vakashandiswa munhoroondo yese kuti vese vanhu nemasi ita zvisarudzo zvingafungidzirwa sezvisina musoro. Mubhuku iri, Charlie Munger anotaura zvakare nezve "Lollapalooza Effect," inova ndiyo simba rekushandisa kwakasarudzika panguva imwe chete. Ichi chiito chinowanzo wedzera mikana yekuti vanhu vazvibate zvisina mwero pakuita sarudzo.
Ndinovimba mitsara yako yakukurudzira iwe mese kumusika wekutengesa, uye kukura sevanhu. Zviripachena kuti mitsara yaCharlie Munger izere nehungwaru uye makore eruzivo munyika yezvemari uye muhupenyu pachahwo. Iwe unogona kusiya maonero ako mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Charlie Munger Quotes
Luis Felipe Ortiz Reyes akadaro
Zvakanakisa zvirevo ». Vanokoka kuratidzwa.
Pindura kuna Luis Felipe Ortiz Reyes
Maitiro ekudyara mu cryptocurrencies